ICyprus ihlubula abokufika abangama-45 amapasipoti abo abatshali zimali beGolden Visa
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zaseCyprus » ICyprus ihlubula abokufika abangama-45 amapasipoti abo abatshali zimali beGolden Visa
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Ubugebengu • Izindaba zaseCyprus • Izindaba zikaHulumeni • Investments • Izindaba • Abantu • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
ICyprus ihlubula abokufika abangama-45 amapasipoti abo abatshali zimali beGolden Visa.
I-European Commission igxeke iCyprus ngokunikeza lawa mapasipoti, yathi “izimiso zaseYurophu azithengiswa,” futhi isola uhlelo “lokuhweba ngokuba yisakhamuzi saseYurophu ngenzuzo yezezimali.”
ICyprus inquma ukususa ubuzwe baseCypriot kubatshalizimali abangama-39 kanye namalungu ayisithupha emindeni yabo.
ICyprus iphinde iphenye amanye amacala ayisithupha, futhi ibeke amanye angama-47 ngaphansi kokuqapha okuqhubekayo.
ICyprus yavuma ngo-Okthoba ngonyaka odlule ukuqeda uhlelo lwayo lweGolden Visa ngoNovemba 1, 2020.
Izikhulu zikahulumeni waseCyprus zisho namuhla ukuthi zizowakhumbula ngokusemthethweni amapasipoti wokuba yisakhamuzi 'i-Gold Visa' avela kubantu bokufika abangama-39 abathole ubuzwe baseCyprus ngaphansi kohlelo lokutshalwa kwemali olwehlisiwe. Abayisithupha babondli babo nabo bazophucwa amapasipoti abo aseCypriot.
Cyprus UMkhandlu woNgqongqoshe umemezele isinqumo sokususa “ubuzwe baseCypriot kubatshalizimali abangama-39 kanye namalungu ayisithupha emindeni yabo,” ngaphandle kokucacisa amagama abantu abathintekile nokho.
Uhulumeni uphinde wathi uphenya amanye amacala ayisithupha okukhwabanisa, futhi ubeke amanye angama-47 “ngaphansi kokuqapha okuqhubekayo… ngokulandela imigudu enikeziwe.”
ICyprus yavuma ngo-Okthoba wonyaka odlule ukuthi iphele Isikimu seGolden Visae ngoNovemba 1, 2020, eyayivumele abantu bakwamanye amazwe ukuthi bathole amalungelo okuhlala nawobuzwe ngokutshala izigidi ezweni. Ukuze bathole ukufaneleka, kuzodingeka, okungenani, batshale imali engu- € 2 million ($ 2.43 million) ezindaweni zaseCypriot ngaphezulu komnikelo esikhwameni sokucwaninga sikahulumeni.
Isikimu, sibizwa ngokuthi imali-yokuba yisakhamuzi, kucatshangwa ukuthi yathola imali engu- € 7 billion ($ 8.12 billion) ngaphambi kokuba uhulumeni ayamukele ukuthi yayivulekele “ukusetshenziswa kabi.”
Balinganiselwa ku-7,000 abantu okucatshangwa ukuthi bathole ubuzwe ngaphansi kwalolu hlelo ngaphambi kokuba luvalwe, lapho uhulumeni ekhethwe yikhomishini ngemuva kwalokho wathola ukuthi ngaphezu kuka-53% walabo abathola amapasipoti ngale ndlela bakwenza lokho ngokungemthetho.
Lapho umuntu esethole ipasipoti yaseCypriot, bazokwazi ukuhamba, basebenze, futhi bahlale kunoma yiliphi elinye lamazwe angamalungu e-European Union. Phambilini, i-European Commission yagxeka Cyprus ngokunikeza la mapasipoti, bethi “amanani aseYurophu awathengiswa,” nokusola uhlelo “lokuhweba ngokuba yisakhamuzi saseYurophu ngenzuzo yezezimali.”